NTỤLỌ AHỤ NA-EKPEGHỊ MMADỤ
SPC Nwụnye Method
Onye Mmekọ Cooperation
TOPJOY-IXPE dị n'okpuru
Kedu ihe bụ IXPE? IXPE bụ okpu mkpuchi ihu na-adịchaghị mma nke nwere ụfụfụ na-eme ọfụma nwere njikọ, yana ihe mgbochi vepo nke 80 micron HDPE (High Density Polyethylene), maka nchekwa mmiri ọzọ na nkwonkwo. Teknụzụ mmepụta ụfụfụ dị mma na -enye ndụmọdụ ...
Nkwadebe Tupu ịwụnye SPC flooring
SPC Pịa Ntọala bụ nhọrọ kacha mma maka ime ụlọ
Ma ọ na-adị n'ụdị mpempe akwụkwọ vinyl, taịl vinyl, ma ọ bụ okpokoro vinyl vinyl ọhụrụ (LVF), na vinyl bụ nhọrọ ụlọ na-atụ n'anya nke ukwuu. Nke a abụghịzị ala e debere naanị maka ime ụlọ ịwụ na kichin. Ọdịiche dị iche iche dị ugbu a, wi ...
Bụrụ ọkachamara ime ụlọ nke ime ụlọ——UNI-CORE imechi mkpọchi ụlọ SPC
COVID agbanweela ụdị ahịa ahịa nrụzigharị ụlọ, na -agbanwe ọtụtụ ka ha jiri ọrụ DIY rụọ nrụnye na nkwalite n'aka ha. Ọdịdị ngwaahịa a na -enweghị ike ịwụnye ngwa emeela ka nrọ nke ala DIY bụrụ eziokwu, yana ngwaahịa dị ka ala vinyl okomoko. Ndị a f ...
Ọkwa ọhụrụ maka TOPJOY-GILARDINO FLOOR GROUP —— Site na 2021 DOMOTEX asia ChinaFloor Show
Ọ bụ nnukwu ihe ngosi maka ụlọ elu TOPJOY-GILARDINO na 2021 DOMOTEX asia ChinaFloor Show (site na Machị 24 ruo Mach26,2021)! TopJoy-Gilardino Flooring Group anọwo na vinyl flooring R&D na nrụpụta kemgbe afọ 20 gara aga. Anyị na -edobe ihe ọhụrụ na teknụzụ ọhụụ na mmepụta ọhụụ ...
Ngwongwo ala maka ndụ na -arụ ọrụ
site na nchịkwa na 21-02-20
Idobe ịma mma nke ala na inwe ike idebe ya ọcha bụ ihe kacha echegbu ndị na -azụ ahịa, ndị nrụpụta na -achọ imeri ihe ịma aka a. A na -elekarị ala na -agbanwe agbanwe n'ozuzu ya anya dị ka nnukwu ngwaahịa maka ndị na -ebute ụzọ ịrụ ọrụ. Ejiri ọrụ n'aka ...
Mmepe Afọ 20, Ahụmịhe Afọ 20 nke ijere Ahịa Ahịa - TopJoy Flooring Industrial
Dịka ọkachamara na -ahụ maka ala ụlọ vinyl nwere ahụmịhe afọ 20 na ụlọ ọrụ a. N'echiche anyị, ọ bụghị ngwaahịa dị ọnụ ala ka a ga -ebute ọnọdụ ahịa, kama ọ bụ teknụzụ dị elu, ọrụ ka mma na ihe ahịa chọrọ. Dị ka ndị ahịa ochie anyị maara, anyị na -amalite azụmahịa dị ka PVC Heat S ...
Kpọtụrụ anyị: (+86) 21-39982788
Dee anyị: info@topjoyflooring.com
Spc Water Proof Vinyl Flooring , SPC Vinyl Ft , Spc Vinyl Plank Flooring , Spc Planks, Spc Floor Tiles, Spc Wood Tiles Flooring ,